Izindaba - Ukufakwa kokuqala kanye nokugcinwa kwenjwayelo
Ukufakwa kokuqala kanye nokugcinwa kwesimiso
Ukufakwa kwe-Mechanism: qala uhlanze i-armature kanye nendlela yokushayela yangaphandle ngophethiloli.Ngemva kokuhlanza, hlola ukuthi idrayivu iyaguquguquka;lapho ufaka, sebenzisa igrisi ye-graphite phakathi kwamapuleti e-friction we-clutch friction, futhi usebenzise amafutha e-organic engxenyeni ye-filament enentambo;i-starter ifakwe enjinini, futhi ibanga phakathi kobuso bokugcina begiya lokushayela kanye nendiza ye-flywheel i-3 5 mm ifanelekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-mesh yamagiya ngendlela efanele.
Ukugcinwa kwemishini: Phakathi nenqubo yokuqala injini, isiqalisi kufanele sethule u-344~400Ah kagesi osuka ebhethrini.Ngakho-ke, ukuze uvimbele ibhethri ukuthi ingashintshile noma ilimale, isikhathi sokuqala akufanele sidlule ama-5s.Ebusika, kulula ukuqala kunzima ukuqala.Izikhathi eziningi zokuqala akufanele zibe zinde kakhulu, futhi izikhawu ezifanele kufanele zishiywe ekuqaleni ngakunye.
Ukuhlolwa kokwehluleka: Isiqalisi sivame ukuba nokwehluleka kanye nezimo ezingakwazi ukuzungezisa noma ukuzungezisa kancane.Kulokhu, hlola izici ezilandelayo:
1. Ibhethri ayinawo ugesi noma ugesi awunamandla, ngakho isiqalisi asikwazi ukuzungezisa noma ukuzungezisa kancane.
2. Intambo yokuqalisa ikhululekile noma icishiwe, futhi iswishi noma iswishi ye-adsorption iyehluleka.
3. Ibhulashi ligugile noma indawo yebhulashi ayilungile, futhi isiphethu sibuthakathaka, okuholela ekuxhumaneni okungalungile kwe-rectifier.
4. Ikhoyili evusa amadlingozi noma ikhoyili yengalo ifushane noma ayixhunyiwe.
5. Isilungisisi soniwe futhi ishidi le-mica liyaphumela, okubangela ukuthintana okungalungile phakathi kwebhulashi nesilungisi.
Namuhla imikhiqizo yethu idayisa ezweni lonke nakwamanye amazwe sibonga ukusekelwa kwamakhasimende avamile namasha.Sihlinzeka ngomkhiqizo wekhwalithi ephezulu kanye nentengo yokuncintisana, wamukele amakhasimende avamile namasha abambisana nathi!
Njengoba sibhekene nobungqabavu begagasi lomhlaba wonke lokuhlanganiswa komnotho, siyaqiniseka ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu kanye nenkonzo eqotho kuwo wonke amakhasimende ethu futhi sifisa sengathi singabambisana nawe ukuze sakhe ikusasa eliqhakazile.
Inkampani yethu inamandla amaningi futhi inohlelo lwenethiwekhi yokuthengisa oluzinzile noluphelele.Sifisa sengathi singasungula ubudlelwano obuhle bebhizinisi nawo wonke amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngesisekelo sezinzuzo ezifanayo.